प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा गुहमन्त्री नदेख्दा प्रचण्ड अलमलमा ,मन्त्रीबाट बहिष्कार कि व्यस्तता ? - Gokarna News
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा गुहमन्त्री नदेख्दा प्रचण्ड अलमलमा ,मन्त्रीबाट बहिष्कार कि व्यस्तता ?
काठमाडौं – नयाँ वर्ष २०७६ को शुभकामनासहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीको नाममा गरेको सम्बोधनका बेला मन्त्रिपरिषद्का प्रभावशाली मन्त्रीहरू नै उपस्थित भएनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहान साढे ६ बजेभित्र बालुवाटार उपस्थित हुन सबै मन्त्रीलाई खबर गरे पनि तत्कालीन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, उद्योगमन्त्री मातृका यादव, कृषिमन्त्री चन्द्रप्रकाश खनाल र खानेपानीमन्त्री बिना मगर सम्बोधनमा उपस्थित नभएका हुन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पार्टी एकीकरण प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन उद्देश्यले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार पुगेका छन्।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एकीकरणबारे छलफल भएको छ। नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले पार्टी स्थापना दिवसको दिन पारेर वैशाख ९ गतेसम्म पार्टी एकीकरण सक्ने बताइरहेका बेला वरिष्ठ नेता नेपालसँग छलफल थालेका हुन्।
वरिष्ठ नेता नेता नेपालले निश्चित मापदण्ड बनाएर मात्रै जिल्ला नेतृत्वको टुंग्याउन माग गर्दै आएका छन्। नेता नेपालले मापदण्डविपरीत जिल्ला नेतृत्व तय गरिए अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। नागरिक दैनकबाट